မ ရီး အ ကိတ် ပို ပြီး ကျိတ် – Hlataw.com
မ ရီး အ ကိတ် ပို ပြီး ကျိတ်
အိမ်ကို ၀င်ထွက်နေတဲ့ ဒရိုင်ဘာတွေ ထဲက တစ်ကောင်နဲ့ စိတ်ကစား မိရာမှ ရွှေစင့်မိဘ များက စိုးရိမ်ပြီး အိမ်ထောင်ချေ ပးခြဲ့ခင်းဖြစ်သည်။ ကိုမောင်ကျော်က ရွှေစင့်ထက် အသက်ကြီးပြီး သဘောလည်း ကောင်းသည်။ လက်ထပ်ပြီးခါစမှာပဲ ရွှေစင့်ကို ပုံမှန်ဖြုတ်သည်။ ရိုးအေးလွန်းတာအပြင် ရုံးအလုပ်တွေနဲ့အမြဲပိနေတာမို့ အခုနောက်ပိုင်း ရွှေစင် က စပေးရင်တောင် နေ့တိုင်းမလုပ်တော့။ လိုးဖြစ်ရင်လဲ လေး၊ ငါးဆယ်မိနစ်လောက် လုပ်ပြီးရင် အရည်ထွက်သွားတာပဲ။ ရွှေစင် နာမှာလဲ အရမ်းစိုးရိမ်သူ။ ရွှေစင် ကတော့ ငယ်ပြီးစိတ်ကြွနေတဲ့အရွယ်၊ လီးအရသာကိုလဲ သိခါစမို့ ဘယ်လိုမှအားမရနိုင်ပါ။ တခါတလေကိုယ်က ဖီးလ်တက်ရုံရှိသေးတယ်၊ သူကသုက်လွှတ်ပြီးဖလက်ပြနေပြီ။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ဟိုဘက်အခန်းက ဦးမောင်ဆီပြေးပြီးတက်ဆောင့်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။
ဟွန့် ..အရှက်နဲ့သိတ်ခါတွေ ထိန်းနေရလို့သာပေါ့.. နောက်တယောက်ရှိသေးတယ် ..ကိုကျော့်ညီ မောင်ဝင်းပေါ့… အိမ်ကိုလာလည်ပြီဆိုရင် ရွှေစင့်တကိုယ်လုံးကိုသိမ်းကျုံးကြည့်တတ်တာ။ အင်္ကျီတွေ၊ ထမီတွေ အကုန်ဖောက်ထွင်းပြီးကြည့်တတ်တဲ့ မျက်လုံးရိုင်းလေး။ ရွှေစင်တခါတလေစဉ်းစားမိသည်။ မောင်ဝင်းက သူနဲ့အသက်ချင်းသိပ်ကွာတာမဟုတ်။ သူ့ကို ယူမိရင်တောင် ပိုကောင်းဦးမယ်လို့။ မောင်ဝင်းကတော့ သူ့ကိုယူမယ့်ပုံလုံးဝမပေါ်။ ရည်းစားတွေထည်လဲတွဲနေသူ။ ဒီလိင်ကိတ်စမှာ ဝါသနာကြီးသူလို့ရွှေစင်မြင်မိသည်။
သူလဲ ရွှေစင့်ကို စားချင်နေမှာပါ။ သူကတော့ ရွှေစင့်ကို လှိမ့်နေအောင်လိုးနိုင်မှာလို့တောင် တွေးမိသည်။ အဲလိုတွေးလိုက်ရင် ရွှေစင့်ဖုတ်ဖုတ်လေးက ရွှဲလာရော။ နောက် ရွှေစင် သတိရမိတဲ့လူတယောက်က ရွှေစင့်အချစ်ဦး စိုင်းစိုင်း ဖြစ်သည်။ သူနဲ့ကတော့ ဘယ်အဆင့်မှမရောက်ခဲ့။ စိုင်းစိုင်းကိုယ်နှိုက်က အိမ်ကဒရိုင်ဘာမို့ လွန်လွန်ကျူးကျူးမလုပ်ရဲတာလဲပါသည်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ရွှေစင်ပိုပြီး ဆာလာသည်။ ကိုကျော်က အလုပ်ကိတ်စနဲ့ခရီးသွားရသည်။ ဒီရက်တွေမှာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအာသာဖြေရတော့မည်။ ညဘက်ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ အဖိုးကြီးနားကပ်ထိုင် ပြီး ပွတ်သီးပွတ်သတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။ ဘွားတော်ကြီးက ဘုရားရှိခိုးနေသည်လေ။ လက်မောင်းကို နို့ကြီးနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တော့ အဖိုးကြီးဖီးလ်တက်သွားပုံပဲ။ လီးတောင်လာတာကို လက်နဲ့ကွယ်ထားရှာသည်။ မိန်းမသဘာဝ ယောကျာ်းတယောက် စိတ်ကို ဆွပေးနိုင်တာမို့ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကျေနပ်မိသည်။ ဦးမောင်မောင်ကတော့ ရွှေစင်ကြောင့်ဒုတ်ခရောက်နေလေပြီ။ ကိုယ့်ချွေးမချောလေးကို အင်မတန်လိုးချင်နေမိသည်။ ဘယ်က ဘယ်လိုစရမှန်းလဲမသိ။ စွန့်လဲမစွန့်စားရဲ။ အိမ်မှာ ဟိုဟာမကြီးကလဲရှိနေသေးသည်။
တသက်လုံး မိန်းမတွေနဲ့ကင်းကင်း ရှင်းရှင်းနေလာခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို့ပဲကျိန်ဆဲနေမိတော့တယ်။ အိမ်က အဘွားကြီးကို တခါမှသစ်စာဖောက်ခဲ့ဘူးသူမဟုတ်။ အခုတော့ ရွှ နေတ့ေဲ ရွှစင်လေးကို ကောင်းကောင်းဆွဲချင်လာသည်။ သူငယ်ချင်းကောင်း ဒီနေ့ ရွှေစင် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရှော့ပင်ထွက်လာလိုက်သည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲ သူမရဲ့ ငယ့်ငယ်လေးတုန်းက သူငယ်ချင်း ထက်ထက် ကိုတွေ့သည်။ ဒီကောင်မက လှလာလိုက်တာ။ ရွှေစင်ပင်မနာလိုဖြစ်မိသည်။ တီရှပ်ကျပ်ကျပ်လေးအောက်က နို့ကြီးတွေက ရုန်းထွက်နေသည်။ စကပ် အောက်က ပေါင်တံလေးတွေကသွယ်သွယ်လျလျ။ ထက်ထက်နဲ့အတူဈေးဝယ်ရင်း ထက်ထက်က သူန့အဲ တူနေ့လည်စာစားဖို့ခေါ်သည်။ သူ့ရည်းစားလေးလာခေါ်မည်တဲ့။ ထက်ထက်ရဲ့ရည်းစားရောက်လာတော့ ရွှေစင် အင်မတန်အံ့သြသွားရသည်။
သူ့ခဲအို ဖြစ်နေတာကိုး။ မောင်ဝင်းရဲ့မျက်နှာမှာအင်မတန်ချိုသာနေသည်။ ထက်ထက်ကလဲ မောင်ဝင်းကို သိသိသာသာကြီးကို ပွတ်သီးပွတ်သတ်လုပ်နေလေသည်။ စားပြီးတော့ ထက်ထက်က သူ့အိမ်လိုက်လာဖို့ခေါ်သည်။ ရွှေစင်ကတော့ အိမ်မှာဘာမှလုပ်စရာလဲမရှိ၊ ရွှေစင်နဲ့ကလဲမတွေ့ရတာကြာပြီမို့လိုက်သွားဖို့ သဘောတူလိုက်သည်။ ထက်ထက်ကမီးဖိုချောင်ထဲမှ ဝိုင်တလုံးယူလာပြီး ဝိုင်သောက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြလေသည်။ ထက်ထက်မှာအခွေတော်တော်စုံသည်။ အောကားအများစုဖြစ်သည်။ အောကားမကြည့်ရတာ ကြာပြီမို့ ထက်ထက်နဲ့အတူအောကားကြည့်ကြ၏။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကားဖြစ်ရာ ရွှေစင်ရော ထက်ထက်ရောစိတ်ကြွရာလေသည်။ ထက်ထက်က သူ့ပေါင်လေးကိုပွတ်လာတာ ရွှေစင်သတိထားမိတယ်။
ဝိုင်အရှိန်နဲ့ ရီဝေ၀ဖြစ်နေလို့ ရွှေစင်မတားမိ။ ထက်ထက်လက်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဆင်းပြီး ရွှေစင့်ထမိန်စကဒ်အကွဲလေးအောက်တိုးဝင်သွားတယ်။ ရွှေစင်ပေါင်ကို ကမန်းကတန်းစိလိုက်ပေမယ့် ထက်ထက်လက်က ရွှေစင့် စောက်ဖုတ်အုံလေးကို အုပ်ထားလိုက်ပြီလေ။ အတွင်းခံအောက်ထဲလက်တိုးဝင်ပြီး သူမစောက်စိလေးကို ကစားပေးနေတာ ရွှေစင်ငြိမ်ခံနေလိုက်တယ်။ အရသာက ကောင်းလွန်းလို့မရှက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ အင်္ကျီကိုလှန်ပြီးကိုယ့်နို့တွေကိုယ်နယ်နေမိတယ်။ ကလင်….. ကလင်……. အရေးကောင်းတုန်း သောက်ဖုန်းကလာတယ်။ ထက်ထက်ကိုလှမ်းဖက်ပြီးတားဖို့လုပ်ပေမယ့် ဒီကောင်မက ချက်ချင်းထသွားတာပဲ။ ” ဟေ့..ရွှေစင်…ရော့… ” ထက် လွှင့်ပစ်ပေးလိုက်တာကိုကြည့်လိုက်တော့ ဗိုင်ဗရေတာလေး။ ဒီအချိန်မှာ လီးတချောင်းလိုနေတဲ့ ရွှေစင်အဖို့ ဗိုင်ဘရေတာကလဲမဆိုးပါဘူး။ အတွင်းခံကို ချွတ်ပစ်ပြီး ကိုယ့်စောက်စိကိုယ် ကလိရတော့တာပေါ့။ လီးငတ်နေ တ့အဲ ချိန် အောကားကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆော့ရတာဖီးလ်ပဲပေါ့။ ရွှေစင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ အခန်းတခါးပွင့်ပြီး မောင်ဝင်း ၀င်လာတယ်။
ရွှေစင်ပြီးခါနီးဆဲဆဲလေးပေါ့။ ရွှေစင်တော်တော်ရှက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ခဲအို အရှေ့မှာ အောကားကြည့်ပြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ထက်ထက်ပြန်ရောက်လာလေရဲ့။ လုံးဝကိုယ်တုံးလုံးနဲ့။ ရွှေစင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲ ရှက်ရမလား ဒီမိန်းမအတွက်ပဲရှက်ပေးရမလားမသိတော့ဘူး ကြည့်ဦးလေ.. ဖင်တုံးလုံးနဲ့ထွက်လာပြီး မောင်ဝင်းနဲ့ ဖက်နမ်းနေလိုက်တာ။ မောင်ဝင်းက ရွှေစင်ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီး ရွှေစင် ကို ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ထက်ထက်ကတော့ မောင်ဝင်းပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီးပုဆိုးကို ချွတ်ဖို့ကြိုးစားနေလေရဲ့။ မောင်ဝင်းရဲ့အနမ်းတွေကို ခံယူရင်း ရွှေစင်စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ထထွက်သွားရမလား။ မောင်ဝင်းပေါင်ကြားကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အမယ်လေး . . .နဲတာကြီးမဟုတ်ပါလား ထက်ထက်ကတော့ အဲဒါကြီးကိုပါးစပ်ထဲ ကြိုးစားငုံနေတယ်။ ပြီးတော့ မောင်ဝင်းကောင်းကောင်းမြင်နိုင်အောင် လေးဘက်ထောက်ပြီး သူ့ဖင်လေးကို ကော့ထားပေးလိုက်တာ။ ရွှေစင် ချက်ချင်းပဲ ထက်ထက်လက်ထဲက လီးကြီးကိုဆွဲလုပြီးစုတ်ပေးချင်လိုက်တာ။ မောင်ဝင်းလက်တွေက အငြိမ်မနေပါဘူး။ အခုဆို ရွှေစင့်အပေါ်ပိုင်းတခုလုံးဗလာကျင်းသွားပြီ။ ကိုယ့်မတ်ရဲ့ရှေ့မှာ နို့ကြီးအပြူးသားနဲ့ ရွှေစင်ရယ်လေ.. နို့နှစ်လုံးကို အပြန်အလှန် တလှည့်စီ စို့ပေးလိုက်၊ ရင်သားနှစ်မွှာကြားထဲကို လျက်ပေးလိုက် လုပ်နေရာ ရွှေစင်တယောက်လည်း အရသာထူးကို ခံစားလို့လာနေရပြီ ဖြစ်သည်။
” ရွှေစင် … စကဒ် ချွတ်ပြီး ကိုယ့်လီးကို စုတ်ပေးပါလား ” မောင်ဝင်း စကားကို ရွှေစင်မလွန်ဆန်ချင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူပိုင်တဲ့ လီးတချောင်းလို လုပ်ပြီးအပိုင်စီးထားတဲ့ ထက်ထက်ကို ပညာပြချင်တာလဲပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ.. အခု အချိန်မှာ မောင်ဝင်း လိုး ချင်နေ တာ ရွှေစင်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ ထက်ထက်က ခြင်းထဲကကြက်ပဲ။ လိုးနေကျစောက်ပတ်ကြီး။ ရွှေစင် ကမန်းကတန်းထ၊ စကဒ်ကို ချွတ်ပြီးတာနဲ့ ထက်ထက်လို ဖင်ကုန်းလိုက်တာဘဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲယုံတယ်လေ။ ရွှေစင့် အိုး ကထက်ထက်အောက်မလျှော့ဘူးဆိုတာ။ လင်ရှိမိန်းမဆိုပေမယ့် ဖင်ကြီးကတကယ့်ကို တောင့်တုန်း။ ဖင်ကြီးကို ထက်ထက်နဲ့အပြိုင် ကော့ထား ထောင်ထားလိုက်ပြီး လီးကြီးကို တယုတယ စုတ်ပေးလိုက်တယ်။ မောင်ဝင်းရဲ့လီးက သူ့ယောကျာ်းရဲ့လီးထက် အဆမတန်ပိုကြီးတာမို့ ရွှေစင် ရင်ခုန်သံမြန်လာတယ်။ လီးကြီးရဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေက တင်းထွက်ပြီး လီးချောင်းကြီးက တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလိုက်တာ။ လီးစုပ်နေရင်းနဲ့တောင် စောက်ပတ်ထဲကအရည်တွေက ပေါင်ခြံတလျှောက်စီးကျနေပြီလေ။ မောင်ဝင်းအတွက် ကတော့ တကယ့်ကို နတ်ပြည်ရောက်နေသလိုပဲ။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါဦး။ တကယ့်ကို အလန်းလေးနှစ်ယောက် သူ့လီးက လု စုတ်ပေးနေလိုက်တာ။ တယောက်က နို့ကြီးကြီး၊ သူ့မရီးက ဖင်ကြီးကြီးနဲ့။ လေးဘက်ထောက်ပြီး လီးစုတ်ပေးနေကြတာမို့ ဖင်ကြီးတွေကတော့ လန်ထွက်နေတာပါပဲ။ ဒီပုံစံက တကယ့်ကို အားရစရာပါ။ အနေအထားက သူ့အမိန့်ကို ကျိုးနွံတဲ့ပုံပေါက်တဲ့ အပြင် ပြီးရင် စိတ်ကြိုက်အနေအထားပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ကမ်းကုန်အောင်တွယ်ပစ်နိူင်တဲ့ အိုးကြီး၂လုံးကို ကောင်းကောင်းတွေ့နေရတာမို့ လီး တင်မဟုတ် မျက်လုံးမှာပါ အရသာရှိတယ်။
သူ့မရီးကိုတော့ ဒီနေ့ သူကောင်းကောင်း သမ ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်ပ.. ရွှေစင့် အိုးကြီးက တကယ့်ကိုရှယ်ဘဲ။ သူ့အစ်ကို ကောင်းကောင်းမဖြိုရသေးပုံပဲ။ ဒီနေ့တော့သူစားဖို့ဖြစ်လာပြီပေါ့။ ပြီးတော့ ထက်ထက်ကိုလဲ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရဦးမှာပေါ့… ဒီဆော်လေးက တိမ်းတိမ်းပွေပွေနေတတ်တဲ့ သူ့ကို နားလည်ပေးတဲ့အပြင်အခုဆို သူ့သူငယ်ချင်းမလေးကိုပါ ခေါ်လာပေးတယ်လေ။ မောင်ဝင်းက ရွှေစင် တို့၂ယောက်ကို လီးစုပ်တာ ရပ်ခိုင်းပြီး အိပ်ခန်းထဲသွားဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ ငနဲသားက သူငယ်ချင်းမနှစ်ယောက်ရဲ့ဖင်တင်းတင်းကြီးတွေကို လက်တဖက်ဆီနဲ့ ပွတ်သပ်ရင်းအိပ်ရာထဲခေါ်သွားတယ်။ အိပ်ရာထဲရောက်တာနဲ့ရွှေစင့်ကို ဒူးထောင်ပေါင်ကားခိုင်းပြီးတက်ချတော့တာပါဘဲ။ သူမ ခံနေကျလီးထက်ကြီးနေတဲ့ လီးတချောင်းမို့ရွှေစင် အံကြိတ်ခံနေရတယ်။ သူမရဲ့စောက်ပတ်နံရံလေးတွေ တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ထွက်လာတာကို ခံစားမိတယ်။
လီးတဆုံးဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆောင့်လိုးတော့တာ။ စောက်ရည်တွေ တရကြမ်းထွက်နေလို့သာတော်တော့တယ်။ ထက်ထက်ကတော့ မောင်ဝင်းဖင်နောက်မှာမှောက်ပြီး မောင်ဝင်းရဲ့ဂွေးဥတွေကို စုပ်နေလေရဲ့။ တခါတလေရွှေစင့်ဖင်ပေါက်ကလေးကိုပါလျက်ပေးတတ်တယ်။ “အ…အင့်အင့် ၊ ကိုရယ် ” “ရွှေစင် နာသွားလားဟင် ” အသဲခိုက်အောင်ကောင်းနေတဲ့ အချိန်မို့ ရွှေစင်ခေါင်းကို ကမန်းကတန်းခါရမ်းရင်း မောင်ဝင်းရဲ့ခါးကို ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ချိတ်လိုက်တယ်။ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်လိုးပေတော့ဆိုတဲ့သဘော။ သူကလည်း တရှုးရှုးတရှဲရှဲနဲ့ဆက်တိုက်ဆောင့်နေတာ ဖွတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ အသံတွေဆူညံနေတာပဲ။ “အား.. ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ “ လို့ ပြောရလောက်အောင် ရွှေစင် အရှက်မကုန် သေးပေမဲ့ ရွှေစင် ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲဖြစ်ပြီး စောက်ပတ်ထဲကအရည်တွေ ပွက်ကနဲထွက်ကျလာတော့တာပေါ့။ ရွှေစင်ကျေနပ်အောင်ဆယ်ချက်လောက် ဆက်ဆောင့်ပြီး ထက်ထက်ကို အလှည့်ပေးဖို့မောင်ဝင်းစဉ်းစားလိုက်တယ်။
အခုဆိုရင် ရွှေစင်ဟာ သူလိုးဖူးတဲ့မိန်းမဖြစ်သွားပြီး သူ့လီးကိုလဲ စွဲသွားလောက်ပြီလေ။ မောင်ဝင်းဟာ သူ့လီးကို ကြီးအောင်အမြဲလုပ်နေတတ်ပြီး အချိန်ကြာကြာလဲဆွဲလိုးနိုင်သူမို့ သူနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်းတွေ တာင် လမ်းကြုံရင် သူ့ကို ကုန်းသွားကြရတာပါဘဲ။ “ထက် လေးဘက်ထောက်လိုက် ” ဒီစကားကို စောင့်နေသူမို့ ထက်ထက် ချက်ချင်းဘဲ ဖင်ကုန်းပေးလိုက်တယ်။ ကုန်းပေးနေသော ဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲပြီး ပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ ဒစ်ကြီးကို ထိုးလိုက်တော့… “အမလေး … အင့် အင့် ” စောက်ရည်တွေရွှဲနစ်နေတာမို့ တချက်ထဲနှင့် တဆုံးဝင်အောင် ထိုးချပြီးဆောင့်လိုးလိုက်တော့သည်။ ဆောင့်နေရင်းလည်း ဖြူးဖွေးဖွံ့ထွားသော တင်ပါးကြီးများကို တဖြန်းဖြန်းရိုက်လိုက်၊ နို့အုံများကို လှမ်းဆွဲလိုက်နှင့် ကောင်းကောင်းကြီး လိုးနေတော့သည်။ “ရှူး ….. အား ကျွတ် ကျွတ် ” “ဆောင့် ဆောင့် အား ” “အား အား ဟင်း ” မောင်ဝင်း၏ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ထက်ထက်မှာ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်သည့် အနေအထားကိုပင် ရောက်နေပြီ။ ရွှေစင်မှာ တဏှာရမက်အရမ်းထန်ပြင်းနေသည့်အပြင် တခြားမိန်းမတစ်ယောက်လုပ်တာကို မိမိလည်းကျန်မနေပဲလိုက်လုပ်ချင်သည့်စိတ်ကြောင့် အမောမပြေသေးသည့်ကြားက ထပြီး ထက်ထက်နှင့်ယှဉ်ကာ ဖင်ထောင်ပေးလိုက်သည်။
ရွှေစင် စိတ်တွေထ နေပြီဆိုတာ သိတ့ေဲ မာင်ဝင်းက ချက်ချင်းဘဲ လီးကို ရွှေစင့်စောက်ပတ်ထဲပြောင်းသည်။ လီးတချောင်းထဲကို မျှ ခံနေရတဲ့ ကောင်မနှစ်ကောင်ကို မျှမျှတတလိုးပေးဖို့ ဖင်ကြီးတွေကို ပူးကပ်နေအောင်နေရာချပြီးတယောက်အချက်၅၀စီဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ်။ ဖင်တုံးကြီး၂တုံးပူးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကောင်မ၂ကောင်က လျှာချင်းတောင်ပလူးနေလေရဲ့။ ထက်ထက်ကတော့ ကိုယ့်စောက်စိကိုယ် ပြန်ကလိနေသေးတယ်။ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ဖင်ကြီးတွေ လှိုင်းထ သွားတာကို တွေ့နေရတာမို့မောင်ဝင်းတယောက်သုက်လွှတ်ချင်လာတယ်။ ရွှေစင်အတွက် အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင် မျက်နှာပေါ်မှာ ပြီးပေးဖို့… “ဒူးထောက်လိုက်ကြစမ်း ” အမိန့်နာခံတတ်တဲ့အရုပ်လေးတေလွို ရွှေစင်တို့ ဒူးထောက်လိုက်ကြတယ်။ မောင်ဝင်းက သူ့လီးကို ခပ်ပြင်းပြင်းဂွင်းတိုက်လို့… ခဏနေတော့ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးထဲက လရည်တွေပန်းထွက်လာပါတော့တယ်။ ပထမတော့ ထက်ထက်မျက်နှာပေါ်။ ချက်ချင်းဘဲ ရွှေစင့်မျက်နှာပေါ် ရွှေ့လိုက်တာ။ လရည်တွေက အများကြီးမို့ ပါးစပ်ထဲဝင်ရုံမကဘူး မျက်နှာပေါ် ဆံစပ်တွေပါ စင်ကုန်ပါတယ်။
ရွှေစင်အဖို့ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြီးခံရတာ အသစ်အဆန်းတခုပါဘဲ။ ပြီးတော့လီးပျော့ပျော့ကြီးနဲ့တောင် ရွှေစင့်ပါးကို ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ ရွှေစင်နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ညနေ။ ဈေးဝယ်ဖို့ထွက်လာတာ အလိုးခံနေရင်းနဲ့ အိမ်ပြန်ဖို့နောက်ကျနေပြီ။ သူမနေတာက ယောက်ခမတွေအိမ်မို့နောက်ကျလို့မဖြစ်။ မျက်နှာသစ်ရင်းကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာက ပေပွနေတာပဲ။ အဆိုးဆုံးမှာ ဆံနွယ်တွေက သုက်ရည်တွေ၊ ချွေးတွေနဲ့ ပူးကပ်နေတာ။ ဘယ်လိုမှ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရတော့။ မျက်နှာသစ်ပြီးထွက်အလာ ဧည့်ခန်းထဲ ရောက်တော့ မောင်ဝင်းက ဘောင်းဘီတိုနဲ့ထိုင်နေတာတွေ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေစင်ရှက်နေသေးသည်။ မျက်နှာဘယ်လို ထားရမလဲ မသိ။ “ရွှေစင်ပြန်တော့မလို့လား ” “အင်း… ဟိုကောင်ကော ” “မောပြီး အိပ်နေပြီ ” ပြောပြောဆိုဆို ရွှေစင့်ကို ဖက်ပြီး အနမ်းမိုးများရွာချလိုက်လေသည်။ “ကိုယ် ရွှေစင့်ကို နောက်တချီလောက် ထပ်လိုးချင်သေးတယ်၊ လိုးရတာ မဝသေးဘူး ” “အာ နောက်ကျနေပြီဟ၊ နင့်အမေကြီးက ပွစိပွစိနဲ့ ” မောင်ဝင်းက ကိုယ်လိုချင်တာရအောင်ယူတတ်သူဖြစ်သည်။
ရွှေစင့်ကို စတွေ့ စကထဲက ထမိန်လှန် ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး ချ ချင်နေတာမို့… “ထမိန်လန်ပြီးကုန်းပေးကွာ ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလိုးချင်လို့ ” ရွှေစင်လည်းမတ်တတ်ရပ်လျှက်ပဲ လက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးလိုက်တယ်။ အတွင်းခံကို ဒူးခေါင်းလောက် တွန်းချပြီးနောက် သူ့လီးကြီးဝင်လာတာပဲ။ “စောက်ပတ်လေးကို ဖြဲထားပေး ” ရွှေစင်လဲ စကားများမနေတော့ဘဲ ဖင်ကို ကော့ထုတ်၊ လက်ကို နောက်ပြန်ပြီး စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲပေးလိုက်တယ်။ “အွန့်… အား၊ ကျွတ် ကျွတ် ” “ရွှေစင်ရယ်၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ စီးနေတာပဲ၊ ကိုယ်တော့ ရွှေစင့်စောက်ပတ်ကို အရမ်းခိုက်သွားပြီ ” “အင့် အင့် အား ” စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကို သွင်းပြီး ပြန်ဆွဲနုတ်လိုက်တိုင်း စောက်ဖုတ် အကွဲ ဘေးသားတွေပါ ပါ သွားတယ်။ ရွှေစင်လည်း ဖင်ကြီးကိုတောင် နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးနေမိတယ်။
မောင်ဝင်းက ရွှေစင့်အကျီ င်္ပေးကနေ နို့တွေကို ဆုပ်ချေနေတာကြောင့် အကျီ င်္တွေလဲ ကြေကုန်ပါပြီ။ သူက အားရပါးရဆောင့်ပြီးလိုးနေရာက အရှိန်လျှော့သွားတာကြောင့် “ကိုယ် မောသွားပြီလားဟင် ” “ဟုတ်တယ် ရွှေစင်ရယ်၊ ဟူး.. ရွှေစင်အပ်ါက တက်ဆောင့်ပေးနော် ” ရွှေစင်လည်း မငြင်းတော့ဘဲ ထောင်မတ်နေတဲ့ သူ့လီးပေါ်မှာ ကားယားခွထိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကိုဖြဲကာ လီးထိပ်ပေါ် တေ့ ထိုင်ချလိုက်တော့ ဖွပ်ကနဲ ၀င်သွားတော့တာပေါ့။ စောက်ပတ်က လိုးသားကျသွားပြီမို့ ချောချောမွေ့မွေ့ပဲ ၀င်သွားတာပေါ့။ ရွှေစင်လည်းအပေါ်ရောက်တာနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါ ထိုင်ချလိုက် ပြန်ကြွလိုက်နဲ့။ “အင့် အင့် အား ” “ဆောင့် ရွှေစင် ဆောင့် ၊ အသားကုန်သာဆောင့် ” မောင်ဝင်းက အောက်ကနေပြီး ရွှေစင့်ဖင်တုံးကြီးကို တဖြန်းဖြန်းရိုက်လိုက်၊ အောက်ကနေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြန်ဆောင့်ပေးလိုက်နဲ့ အရသာယူနေပါတယ်။
တခါတလေများ ရွှေစင် ဖင်ဝလေးကို လက်ညှိုးလေးထိုးထည့်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့် ရွှေစင်ခမျာ အသည်းတယားယား။ လောကကြီးကို မေ့လောက်အောင်အချက်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီးချိန်မှာ လီးကြီးထဲက လရည်တွေဟာ ရွှေစင်စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းဝင်သွားပါတော့တယ်။ ရွှေစင်လဲ လရည်ထွက်တာကို သိသိချင်း စောက်ခေါင်းထဲကို လီးတချောင်းလုံး အဆုံးထိဝင်အောင် အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်ချထိုင်ပေးလိုက်တာ စောက်ခေါင်းလေးတလျှောက် လီးကြီးပွတ်တိုက်တိုးဝင်သွားတာမို့ အီစိမ့်နေတာပါဘဲ။ “ဗွတ် ဗွတ် ” ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးထားလို့ စောက်ခေါင်းထဲက လေတွေပြန်အံထွက်နေပါပြီ။ “ ရေဆေးမလို့လား ” “ အင်းပေါ့ ” “ မဆေးပါနဲ့ချစ်ရယ်၊ ကိုယ့် လရည်တေယွူပြီးပြန်နော် ” “ အာ ကိုယ်ကလည်း တမျိုးကြီးပဲ။ မသွားချင်ပါဘူး။ ” ရွှေစင်ခမျာ ငြင်းလို့မရနိုင်တာကြောင့်ရော၊ မောင်ဝင်းကချွဲနေတာကြောင့်ရော ဒီလိုပဲပြန်ဖို့ စဉ်းစားရတော့သည်။ ခုနင်က အနှိုက်အညစ်ခံထားရလို့ ကြေမွနေတဲ့ အကျီ င်္လေးကို အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ပြန့်အောင်ကြိုးစားရသေးသည်။ စကဒ်ထမိန်ကလဲ တွန့်ခေါက်ပြီး တချို့နေရာမှာ သုက်ရည် အကွက်တွေက ကော်လို ကပ်လို့။ ပြီးပါပြီ…….
ခိုး စား ရ သော အ တွေ့အ ကြုံ
လယ် ကွင်း ထဲ က လို ပွဲ